भोकभोकै राहत लिएर यस्तो अवस्थामा बारा पुगे रबि र धुर्मुस, हाम्रो भगवान भन्दै पिडित जनताको रुवाबासी चल्यो - Nepali Taja Khabar
नेपालमै भेटियो ‘महादेव लुकेकाे’ अनाैठाे शिवथान ढुंगा
अत्यत दुखद खबर !मोटरसाइकलले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा घाइते भएकी रञ्जनाको अस्पतालमै ज्यान गयो
अत्यत दुखद खबर !दुर्घटना , स्टाफ नर्स कविताको घटनास्थलमै मृत्यु !,,,,,,,,
अति शक्तिशाली साक्षत देवी पाथिभरा, जसको जे छैन एक दर्शनले हुनेछ पुरा ॐ लेखी कमेन्ट गर्नु होस
देखेर पनि नदेखेको जस्तै नगर्नु होला ! ङलिङ खानी स्थित गुम्नाम गुप्तेश्वर महादेव गुफा : सक्दाे सेयर गराै
दुखद खबर : विवाह गरेको एक महिनामै श्रीमती यसरी दैवको प्यारी बनेपछि, आयो टप्प टिप्यो, लग्यो, मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो,,,,,,,,,,,RiP लेख्नुहोस् मृत्य आत्यमाले शान्ति पाउनेछ)
सिन्धुपाल्चोकमा फेला पर्यो अनौठो रुख, काट्दा आउछ रातो रगत !!
बुधबारको दिनमा श्रीकेदारनाथ मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर २०७६ बैशाख ४ गते बुधबारको राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ ।।#जय_श्रीकेदारनाथ।।
मुख्य पृष्ठ /रोचक/भोकभोकै राहत लिएर यस्तो अवस्थामा बारा पुगे रबि र धुर्मुस, हाम्रो भगवान भन्दै पिडित जनताको रुवाबासी चल्यो
भोकभोकै राहत लिएर यस्तो अवस्थामा बारा पुगे रबि र धुर्मुस, हाम्रो भगवान भन्दै पिडित जनताको रुवाबासी चल्यो
हास्य कलाकार सिताराम कट्टेल धुर्मुस यो बेला बारामा पुगेका छन। हिजो भएको घटनाको अबस्था बुझ्दै राहत सामग्री लिएर धुर्मुस यतिबेला बारा पुगेका हुन्।
त्यहा धुर्मुसले आफुले सक्ने सहयोग गरिरहेको छन। उनि पुगेको ठाउँमा कस्तो छ अबस्था भन्ने प्रश्नमा उनि भाबुक हुदै बताउछन’सम्हाल्न सक्ने अबस्था छैन,चारैतिर रुवाबासी छ,बस्ने बास छैन खाने अन्न छैन बिरक्त अबस्था छ’।
धुर्मुसले एका बिहानै आफ्नो सामाजिक संजलामा लेखेका थिए :आँधी हुरीले तराईमा तहसनहस गरेको समाचारले बेचैन बनाएको छ ।
ज्यान गुमाउनु हुनेप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, घाउचोट लागेकाहरुलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र शोक सन्तप्त परिवार प्रति धैर्य धारणको शक्ति मिलोस । आफुले सकेको सहयोग गर्न काठमाडौंबाट बारा/पर्साका लागि निस्किसकेको छु ।
भने काठमाडौं बाट बारामा पुगेर चामल ४०० बोरा र पाल २०० ओटा सहयोग गरेका छन् । धुर्मुसको काम देखेर रबि लामिछानेले धेरै तारिफ र धन्यवाद दिएका छन् । भोकभोकै राहत लिएर यस्तो हालतमा बारा पुगे रबि र धुर्मुस | हाम्रो भगवान भन्दै जनताको रुवाबासी…हेर्नुहोस् भिडियो…
काठमाडौँ : शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो। यो विशेषगरी धार्मिक कार्यमा प्रयोगमा ल्याइन्छ। शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो। यो विशेषगरी धार्मिक कार्यमा प्रयोगमा ल्याइन्छ।जीउँदो शङ्ख समुद्रमा पाइने जलचरले बनाएको खबटा हो, यो धेरै जसो वामावर्त अथवा दक्षिणावर्तमा बनेको हुन्छ। प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न प्रयोजनमा ल्याइने शंख एक प्रकारको समुद्री चिप्लेकिराको कडा आवरण हो यो समुन्द्रको किनार मा पाईने गर्दछ।धार्मिक अवसर एवम् सांस्कृतिक कार्यमा यसलाई फूकेर बजाउन पनि सकिन्छ। तसर्थ यसलाई एक बाजाका रूपमा पनि लिइन्छ। नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश आदि मुलुकमा यसको यसरी प्रयोग भएको पाइन्छ ।विषयसूची [लुकाउने] १ किसिम२ हिन्दू धर्ममा प्रयोग३ औषधीका रूपमा प्रयोग४ सन्दर्भकिसिम[सम्पादन गर्ने]शंख विभिन्न किसिमका हुन्छन्, तीमध्ये दाहिना शंख बहुमूल्य मानिन्छ, जुन निकै महँगो हुन्छ । लाखौं शंखमा दाहिना शंख एउटा पाइन्छ ।
औषधीका रूपमा प्रयोग[सम्पादन गर्ने]आयुर्वेद उपचारमा शंख भस्मको ठूलो महत्त्व छ । शंख भस्म बनाउन शंखलाई माटोको भाँडोमा राखेर पाँच/छ फिट गहिरो खाल्डोमा गुइँठाले पोलेर निकाली घ्यूकुमारीको रसमा पिन्नु पर्छ । यसमा क्याल्सियम, क्याल्सियम सल्फेट, म्याग्नेसियम आदि तत्त्व प्रसस्त पाइन्छन् ।शंख भस्म अम्लपित्त, अनुहारको चाया, डण्डीफोर र खत हटाउन उपयोगी हुन्छ । अनिद्राको बिरामीलाई कानमा दुइटा शंख राख्दा समुद्री लहरको कर्णप्रिय आनन्दले निन्द्रा लगाउँछ भने शंख जलले मुख धुँदा अनुहार उज्यालो हुन्छ ।कान पाक्ने रोगको उपचारमा प्रयोग हुने शंख मोतिविन्दु, रतन्धोलगायतका आँखासम्बन्धी रोगमा पनि लाभदायक मानिन्छ । आयुर्वेदमा विभिन्न १५ रोगमा शंखबाट बनाइएका औषधी प्रयोग हुन्छन्।
अन्य समाचार,डा.मिना झा भन्नुहुन्छ महिलाकोमासुपलाउदै मा पाठेघर नै काटेर फाल्नु पर्दैन, यसरी सजिलै सँग सामाधान गर्न सकिन्छ ?तपाइ पनि एक शेयर गर्नुहोस ! बनेपाकी ३० वर्षीया शर्मिला (नाम परिवर्तन) लगातार रक्तश्राव भएपछि चिकित्सककहाँ पुगिन्। अल्ट्रासाउण्ड गरेपछि चिकित्सकले भने, ‘पाठेघरमा मासु पलाएको छ, तुरुन्त अप्रेशन गर्नुपर्छ ।’ एक सन्तानकी आमा शर्मिला चिकित्सकको कुरा सुनेर आत्तिइन्। उनले औषधि खाएर निको हुन्छ कि ? भनेर सोधिन् पनि। तर, चिकित्सकले पाठेघरमा मासु पलाएकोले पाठेघरै फाल्नुपर्ने दोहो¥याए।दोस्रो सन्तानको योजनामा रहेका शर्मिला र उनका पतिका लागि सुखद् समाचार थिएन यो । उनको उमेर पनि त ३० वर्ष मात्रै थियो। चिकित्सकले अप्रेशनबाहेक अर्को उपाय नभएको बताएपछि उनीहरुले अप्रेशनका लागि मिति समेत लिए।
अपे्रेशनको मिति जति नजिक आयो, चिन्तापनि थपिंदै गयो। पहिलो मिति बहाना बनाएर टारे। अस्पतालले अर्को मिति दियो । अस्पतालले पटक–पटक फोन गरेर अपे्रशनका लागि बोलाइरह्यो । तर, मनले नमानेपछि उनीहरुले अन्य ३÷४ जना काठमाडौंका नाम चलेका स्त्री रोग विशेषज्ञसँग जाँच गराए।शर्मिलाले भनिन्, ‘अधिकांश चिकित्सकले औषधि खाएर निको हुन्छ भनेपछि मेरो मन ढुक्क भयो। नत्र मलाई राति निद्रा नपर्ने, चिन्ता लागिरहने समस्या भयो। झण्डै डिप्रेशन भएको।’ शर्मिला मात्र होइन, रुपन्देहीबाट आएकी राधा भण्डारीलाई पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो। उपचारका लागि प्राइभेट अस्पतालमा पुगेकी उनलाई चिकित्सकले पाठेघरमा मासु पलाएकोले तुरुन्तै फाल्नुपर्छ भने ।
उनले अन्य चिकित्सकसँग पनि परामर्श गरी औषधि खाइरहेको बताइन्। ‘आजकल त के भएको, एउटै चिकित्सकलाई देखाएर त विश्वासै नलाग्ने, चिकित्सकपिच्छे फरक कुरा आउँछ, कसको कुरा ठीक हो पत्याउनै गाह्रो।’स्वास्थ्यखबरको सम्पर्कमा आएका यी दुई महिलाको विषयपछि स्वास्थ्यखबरले प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञसँग चासो रोखेको थियो ।सो क्रममा यी महिलाजस्तै धेरै महिलालाई चिकित्सकले पाठेघर नै फाल्नुपर्छ भनेर कर लगाउने गरिएको भेटियो। स्त्री रोग विशेषज्ञकहाँ पुग्ने धेरै महिलामा पाठेघरको मुखमा मासु पलाउने समस्या देखिन्छ। पाठेघरमा मासु किन पलाउँछ ?पाठेघरमा मासु पलाउने बित्तिकै शल्यक्रिया आवश्यक छ वा छैन ? यिनै विषयमा परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा २५ वर्षदेखि कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. मीना झासँग गरिएको कुराकानी।
पाठेघरमा मासु किन पलाउँछ ? पाठेघरमा मासु पलाउनुको कारण यही नै हो भन्ने छैन। वंशाणुगत कारणले पनि हुन्छ। कतिपय अवस्थामा थाहा नै हुँदैन। अन्य समस्या लिएर अस्पताल आएका महिलालाई समस्याका आधारमा जाँच गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ पाठेघरमा मासु पलाएको रहेछ भनेर।पाठेघरमा मासु पलाएको कसरी थाहा पाउने, यसका लक्षण के–के हुन् ? पाठेघरमा मासु पलाएको शंका गर्ने प्रमुख कारण महिनावारी हुँदा धेरै रगत जानु, अत्याधिक पेट दुख्नु हो । महिनावारी हुँदा सामान्यतः५÷६ दिनमा श्राव बन्द हुनुपर्छ । तर, यस्तो समस्या भएका महिलालाई धेरै दिनसम्म रक्तश्राव भइरहन्छ । बीचमा रोकिएर फेरि श्राव हुने सम्भावना पनि हुन्छ ।पेट अत्यधिक दुख्ने तथा रगत धेरै बग्दा त्यसले अन्य समस्या पनि ल्याउँछ ।शरीरमा रगतको कमी भएर एनिमिया हुने, सेतो पानी बग्ने, कमजोरी हुने, समस्या हुन्छ । हामीकहाँ महिलाहरु धेरै रगत बग्यो, महिनावारी हुँवा वा अन्य समयमा पनि अत्यधिक पेट दुख्यो, सन्तान भएन, गर्भ रहन्छ तर खेर गइरह्यो भन्ने जस्ता समस्या लिएर आउँछन् । उनीहरुलाई जाँच गरेपछि पाठेघरमा मासु पलाएको थाहा हुन्छ । हामीले उनीहरुसँग सोधपुछ गरी र अल्ट्रासाउण्ड गरेर निश्चित गर्छौं।धेरै चिकित्सकले पाठेघरमा मासु पलाउने बित्तिकै पाठेघर फाल्नुपर्छ भनेको सुनिन्छ, यसको उपचार अपे्रशन मात्र हो ?
राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो । बिरामीको अवस्था र आवश्यकता हेरी उपचार हुन्छ। धेरै महिला अन्य थुप्रै ठाउँमा उपचार गराएर अन्तिममा प्रसूतिगृह आउँछन्।अन्य डाक्टरले पाठेघर तुरुन्त फाल्नुपर्छ भन्नुभयो, मलाई के भएको डाक्टरसाप?भनेर सोध्छन् ।कसैको उमेर पनि कम नै हुन्छ। उनीहरुलाई पाठेघर झिक्नुपर्छ भन्दा डर लाग्नु स्वभाविक हो। सत्य त के हो भने पाठेघरमा मासु पलाउने बित्तिकै पाठेघर झिकेर फाल्नुपर्दैन।सामान्य शल्यक्रिया मायोमेक्टोमी अर्थात् मासु झिकेर फाल्न सकिन्छ। पलाएको मासु ठूलो छ अर्थात् ठूलो फ्याब्राइट छ भने मासु झिकेर बायोब्सी गरेर पनि निक्र्योल गरी उमेर पुगेको छ भने झिक्न सकिन्छ।
हामीले कम उमेर भएका,सन्तानको रहर नपुगेका, औषधि गरेर निको हुने अवस्थाका महिलाको पाठेघर सकेसम्म फाल्दैनौं। कति महिलाहरु आफैं पनि पाठेघर झिकिदिनुस् ढुक्क हुन्छ भन्छन्। तर, उनीहरुलाई औषधिले निको हुने अवस्था भएसम्म पाठेघर झिक्नुहुन्न भनेर सम्झाउने काम चिकित्सक हो। आजकल धेरै निजी अस्पतालमा पाठेघरसम्बन्धी समस्या हुनासाथ झिक्नुपर्छ भन्ने गलत अभ्यास भएको छ। झिक्नैपर्ने अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा पाठेघर झिक्नुहुन्न। फालिसकेपछि त्यसले अझ धेरै समस्या निम्त्याउन सक्छ।
सन्तान पूरा भएका, उमेर पुगेका, शल्यक्रियाबाहेक अन्य उपाय नभएका महिलाको हकमा भने मात्र फाल्नैपर्ने अवस्था हुन्छ।एकपटक मासु फालेपछि फेरि पलाउने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? पाँच वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशत बिरामीमा फेरि पलाउने सम्भावना हुन्छ । किनकि प्रजनन् क्षमता भएकामहिनावारी हुने महिलामा पलाइरहन्छ। परिवारका अघिका महिलामा थियो भने पछिका महिलालाई पनि
नयाँ वर्षको दिन घरमा गर्नुहोस् यी ५ परिवर्तन, वर्षभरि नै हुनेछ लक्ष्मीको बास!हेर्नुहोस
म १७ वर्षीया युवती हुँ, मलाई रात परेपछि बढी उत्तेजना फिल हुन्छ के गर्ने होला ?
यो हो संसारकै ठुलो हिन्दु मन्दिर : साउन महिनामा सेयर गरेर अद्भुत लाभ लिनुहो् पूरा पढ्नु होस ।।
अत्यत दुखद खबर ! मलेसियामा झुन्डिएर आत्महत्या,,,,,,,,,,,,,,RiP लेख्नुहोस् मृत्य आत्यमाले शान्ति पाउनेछ)
प्रकाश सपुत र प्रिती आलेको दोहोरी ब्याटल भाग-२ सार्वजनिक : ( भिडियो )